featuresfive – Purple Feminist Group
HomeBlogPosts Tagged "featuresfive"
Feminist Literature Competition (5)
. ထိုနေ့က ဇန်နဝါရီ(၃၁)ရက်နေ့။ နောက်နေ့မနက်ခင်း ခပ်စောစောထပြီး ပြင်ဆင်ရတော့မယ်။ ဒီနေ့က ကျွန်တော့အတွက် သိပ်အရေးကြီးတယ်။ လက်မလွတ်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုမို့ ကျွန်တော် စောစောရောက်အောင် သွားရမယ်။ ကျွန်တော်အလုပ်ရမှဖြစ်မယ် အမေ။ ကျွန်တော်က လူငယ်သဘာဝ အိမ်မက်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော်ဟာ ဘွဲ့ရပြီးကာစ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမယ်။ ကြိုးစားမယ်။ ပိုက်ဆံရှာမယ်။ မိသားစုကိုပြန်ပြီး ပံ့ပိုးမယ်။ ကျွန်တော့ခြေထောက်ပေါ် ကျွန်တော်ရပ်တည်မယ်။ ပြီးရင်တော့ အမေ့ကို ကျွန်တော့ဘဝတစ်လျှောက် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေ သိရအောင် ပြန်ပြောပြချင်တယ်။ အမေရေ ကျွန်တော်သိပ်ပင်ပန်းတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အခုထိသေချာ အနားမယူခဲ့ရသေးဘူးဗျာ။ မိန်းကလေးဆန်ဆန်နေတတ်လို့ အမေ့ရဲ့ ဒေါသတကြီးရိုက်သံတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေက လှောင်ပြောင်လို့ဖြစ်တဲ့ မိသားစုရန်ပွဲတွေကြားမှာ ကျိတ်ငိုနေခဲ့ရတဲ့နေ့တွေ အခုထိမှတ်မိနေဆဲပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်က “အခြောက်” လို့ခေါ်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော်အမေ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်စေတာကို ကျွန်တော်သိပ်နားလည်တာပေါ့ဗျာ။ တစ်ကယ်တော့ အမေ့သားက ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ် ရဲရင့်ချင်နေခဲ့တာဗျ။ မိသားစုအဆင်မပြေတာလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးချင်စိတ်နဲ့ပဲ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ် အမေ။ ကျွန်တော်ဟာ အိမ်ထောင်ကျဖို့ သိပ်မဖြစ်နိုင်တာမို့ ဒီမိသားစုလေးကိုပဲ တစ်ခုတည်းသော မိသားစုလို့ သတ်မှတ်ထားပြီးသားပါ။ “ကျွန်တော်တို့ဟာ အယောင်ဆောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရွံစရာကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး” အမေ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကြင်နာတတ်ပြီး ရဲရင့်တဲ့လူတွေပါ။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးဟာ အကြိုက်မတူကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူအများစုနဲ့ အကြိုက်မတူတိုင်း မှားယွင်းနေတဲ့လူတွေ၊ ကျက်သရေမရှိတဲ့လူတွေ ဖြစ်သွားရောလားဗျာ။ ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တစ်ဖတ်သတ်အမြင်တွေပဲဆိုပြီး သက်သေပြချင်တယ်။ တစ်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်ဘဝအစစ်အမှန်ကို ဖွင့်ပြောပြရင် အမေတို့က လက်ခံပေးမယ်။ ပြီးရင် အမေတို့ကို တစ်လှည့်ပြန်လုပ်ကျွေးရင်း အတူပျော်ပျော်ကြီးနေကြမယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် အိမ်မက်ကလေး ဖေဖော်ဝါရီလမှာ စတင်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့ လျှောက်လမ်းတွေ အကုန်ပျောက်သွားသလို၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်မက်လေးလည်း ဝေဝါးလာခဲ့တယ်။ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ကျက်သရေကင်းမဲ့တဲ့၊ သိပ်ရွံ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့ လူတွေက ကျွန်တော့်ဘဝအတွက်လည်း တရားခံတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နေ့ညမနား တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ နာကျည်းသံတွေပြုရင်း၊ သံပုံးတီးရင်းနဲ့ပဲ စိတ်ဖြေဖျောက်ခဲ့တယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ ဖြစ်ချင်စိတ်တွေကို ဦးဆောင်ဟစ်ကြွေးခဲ့တုန်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေကိုပါ အော်ဟစ်ပစ်ချင်ခဲ့သေးတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အမှန်တရားအတွက် သိပ်ရဲရင့်တယ်။ ကျွန်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ သူတို့တစ်တွေကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ လိင်စိတ်ကွဲပြားနေပေမယ့် ပုံမှန်ယောကျ်ားတစ်ယောက်ထက် ပိုပြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုတော့ အမေသိရင် ဂုဏ်ယူမလားမသိဘူး။ ပြောမယ့်သာပြောရတာ အမေ့သားတို့ အသိုင်းအဝိုင်းက တစ်ကယ်သတ္တိရှိကြတယ်ဗျ။ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲက ပုံတွေကိုကြည့်ရင် သိပ်အားရှိတာပဲဗျာ။ ခြောက်ရောင်ခြယ်သက်တံ့ပေါ်က ချစ်စဖွယ်လူသားတွေရဲ့ သတ္တိကို အမေမြင်ခဲ့ရမှာပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် သူတို့လေးတွေအကြောင်း စဥ်းစားရင် အတော်ခံစားရခက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ပုံမှန်လိင်စိတ်ခံယူထားတဲ့သူတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးမရခဲ့တာတွေ၊ ဖိနှိပ်ခံထားရဆဲအခြေအနေတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ တစ်ချို့လူငယ်လေးတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ကြတယ်လေ။ လိင်စိတ်ကွဲပြားနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက် အဆုံးစီရင်လိုက်တိုင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ တက်လာတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘဝတစ်လျှောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကြောင့် သတ်သေသွားတဲ့ လိင်စိတ်ကွဲပြားသူ လူငယ်တစ်ဦးအကြောင်းကို မကြာသေးခင်က ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ သူတို့ အဲ့လို လွတ်လမ်းရှာခါနီးရေးခဲ့တဲ့စာတွေက ကျွန်တော့စိတ်ထဲအမြဲစွဲထင်နေတယ်။ ကျွန်တော်ကသာ ငြီးငြူနေတာဗျာ။ တောနက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေလည်း အများကြီးပဲဗျ။ ၈၈ တုန်းက လိင်စိတ်ကွဲပြားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ အခု ပြည်သူ့အစိုးရရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်ခင် သူစွန့်လွှတ်ခဲ့ရတာတွေ၊ ပုံမှန်ယောကျ်ားသားတွေထက်ပိုတယ်။ လူသားဆန်တယ်လို့ပြောရရင် အားတက်စရာကြီးပဲဗျာ။ ဒါတွေကို အမေကြားသိလိုက်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။ ကျဆုံးအာဇာနည်တွေထဲက လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတွေကိုတော့ ထိထိရောက်ရောက် အသိအမှတ်ပြုတာမျိုးမမြင်ရသေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်အထိ ဖိနှိပ်ခံရမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ မမေးရက်ပါဘူး။ ဒီကာလတစ်ခုကို ကျော်လွန်ပြီးရင်တော့ အောင်ပွဲနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေအတွက် ကျွန်တော် ကြိုးစားချင်သေးတယ်။ လိင်စိတ်ကွဲပြားလူငယ်တွေဟာ ကမ္ဘာတည်သ၍ရှိနေဦးမှာပဲ။ သူတို့ကိုတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေကလို လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝနဲ့ ဘဝကို အစအဆုံး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ရှင်သန်စေချင်တယ်။ ပြီးတော့ အမေ့ကို ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြောချင်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ပျော့ညံ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ အဲ့လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခက်ခဲတဲ့မြေကပွင့်တဲ့ ပန်းလေးတွေလိုပဲ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ကြီးပြင်လာကြတဲ့အတွက် သိပ်ကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ အမေတို့ မရှိတော့တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာလည်း အမေ့သားက ဘယ်လောက်ထိလောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သလဲဆိုတာ အမေတွေ့ရင်ကျေနပ်စေမယ့်အထိ ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။ ဒါတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်မက်တွေပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ အိမ်မက်တူနေတဲ့ လူငယ်တွေရော ဘယ်လောက်ထိ များမလဲလို့ ဘယ်သူက သိနိုင်မှာလဲ အမေရယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ ကျမိတာပဲ အမေရေ့။ ချည်တိုင်ကနေ လွတ်အောင်ပြေးနေသလိုပဲ တစ်သက်လုံးလွတ်အောင်ပြေးနေတယ်။ ဒီတစ်ချီတော့ ကျွန်တော့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ရော၊ ကျွန်တော်တို့အနာဂါတ်အတွက်ရော ကြိုးစားမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဟာသ သာသာပဲ ဆိုတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံချည်တိုင်ကနေ ကြိုးပြတ်အောင် ပြေးတော့မယ်ဗျာ။ အမေ့ကိုချစ်တယ်။ အဖေ့ကိုချစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနာဂါတ်တွေမှာဖြစ်လာမယ့် အခက်အခဲတွေကို စိတ်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရဦးမယ်။ အမေတို့သိဖို့ ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းတွေလည်းပြောပြရဦးမယ်။ လောလောဆယ် တော်လှန်ရေးကာလကြီးကို အတူတူဖြတ်ကျော်ရင်း အားတင်းထားကြမယ်လေ။ မှတ်ချက်။ တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအသက်ပေးခဲ့သော လိင်စိတ်ကွဲပြားသူအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကို လေးစားဂုဏ်ပြုချင်ပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားသော လူငယ်များအတွက် ဝမ်းနည်းမိသော စိတ်ခံစားချက်ဖြင့် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူ − ဇော်
Featured Selection – ” Vera ”
. ” တော်လှန်ရေးကာလ စိတ်ကျန်းမာရေး အတွေ့အကြုံများ ” “ အိုဘယ်ဆီမှာ…အရပ်ဆယ်မျက်နှာ “ မြင့်မားတဲ့ တိုက်ခန်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာပဲ နေက တဖြည်းဖြည်းဝင်သွားတာနဲ့အတူ ညအမှောင်က ကြီးစိုးလာတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ထဲက ဆယ့်ငါးပေပတ်လည်အခန်းငယ်လေးထဲ ကျွန်မရဲ့ အသက်ရှူရခက်တဲ့ရောဂါက ပိုပိုဆိုးလာတယ်။ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မသတိထားမိ‌တော့ တိုက်ခန်းရှေ့ဝရန်တာမှာ။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ကိုဗစ်က ပြန်သက်သာလာတာမကြာသေးဘူး။ ဒါ့အပြင် အလုပ်လက်မဲ့။ ကျောင်းကလည်း နားထားတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အချိန်ပြည့် ကျွန်မသုံးနေမိတယ်။ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ သေနေကြတဲ့လူတွေ။ အင်စတာဂရမ်က လူချမ်းသာနဲ့ဆယ်လီဘရတီတို့ရဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ ပုံရိပ်တွေ။ အကူအညီတောင်းခံနေကြတဲ့ စီဒီအမ်သမားတွေနဲ့ စစ်ပွဲအတွင်းတော်လှန်ရေးအတွင်းက ကျဆုံးရတဲ့ အာဇာနည်တွေ။ ကျွန်မစိတ်ဟာ ဟိုပျံ့သည်ပျံ့။ အထိန်းအကွပ်မဲ့စိတ်ဟာ နှိုင်းယှဉ်မိသွားတယ်ဆိုတာ ကျွန်မဝန်ခံပါတယ်။ နဂိုကတည်းက ငွေကြေးတတ်နိုင်လို့ နိုင်ငံခြားကျောင်းသွားတက်နေသူလည်းအများကြီး၊ တက္ကသိုလ်ပြီးရင် ကျောင်းသွားတက်မယ့်သူတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုဆီ စိတ်က ရောက်သွားတယ်။ ကာယအလုပ်သမားတွေထဲအစားအသောက်ပို့ဆောင်သူတွေ၊ ဆိုက်ကားနင်းသူတွေ၊ ‌ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေ၊ တစ်နေကုန်ထိုင်စက်ချုပ်နေရတဲ့ စက်ရုံအလုပ်သမတွေ စသူတွေပေါ့။ တစ်ချိန်က ငယ်စဉ်အခါမကြိုးစားရင် ကာယအလုပ်သမားတွေဖြစ်လာမယ်လို့ ဆုံးမတာကို သတိရလာတယ်။ ဒါဟာတကယ်မှန်တယ်လို့ ကျွန်မမယုံကြည်ပါဘူး။ စက်ရုပ်တွေ၊ ခေတ်မီစက်ကိရိယာတွေ အပြည့်အဝမသုံးနိုင် သေးသရွေ့ အခုလိုလုပ်ပေးမယ့် အလုပ်သမားတွေကို ကျွန်မတို့လိုအပ်တာပဲမဟုတ်လား။ သူတို့သာမရှိရင် ကျွန်မတို့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြီး အဆင်ပြေနိုင်ဦးပါ့မလား။ လူ့ဘဝကြီးမှာ သူ့တာဝန် နဲ့သူ သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူ အရေးပါတယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ပန်းအိုးငယ်လေးထဲ အလှစိုက်ထားတဲ့ စံပယ်ရနံ့တွေသင်းပျံ့လို့။ မဇ္ဈိမတီဗွီကနေ လှုံ့ဆော်ချက် တစ်ချို့ကို ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်။ ကြားလိုက်မိတာကအခုလို ကပ်ဘေးနဲ့ အာဏာသိမ်းမှုတွေကြား အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေတာ‌တွေများတော့ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေများတတ်ပါတယ်တဲ့။ စိတ်ဖိအားတွေကဦးတည်သွားပြီး ရှေးမျိုးရိုးစဉ်ဆက် ပက်ထရီအာခီစနစ်ရဲ့ အခွင့်ထူးခံမှုတွေနဲ့ ရောပြွမ်းနေ တာပေါ့။ ကျွန်မ နယ်မြို့လေးဆီရောက်ခဲ့တုန်းက အိမ်မှာအလှူလုပ်ရင်း ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ဟောခဲ့တဲ့ တရားလေးကိုသတိရမိတယ်။ ပန်းပုဆရာ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဝမှာ ‘ရင်ဖွင့်ပင်’လေးရှိတယ်။ပန်းပုဆရာဟာ အလုပ်က အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာတိုင်း ချက်ချင်းတန်းမဝင်ဘဲ အပင်လေးကို ပြောတယ်။ အပင်လေးကို စကားတိုးတိုးလေး အမြဲပြောပြီးမှ အိမ်ထဲဝင်ပါတယ်တဲ့။ သူတို့မိသားစုကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း လင်မယားဟာ ရန်မဖြစ်၊တစ်မိသားစုလုံးအဆင်ပြေနေရောတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ အိမ်နီးချင်း လယ်သမားကမေးတာပေါ့။ ပန်းပုဆရာကြီး ပန်းပုဆရာကြီးက မိသားစုနဲ့အမြဲအဆင်ပြေတယ်နော်။ ကျွန်တော်သတိထားမိတာ ပန်းပုဆရာကြီးက စကားတွေပြောပြောနေတာလည်းတွေ့လို့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေရှိရင်မျှဝေပါလို့ မေးတော့မှ ပန်းပုဆရာက ကျွန်တော်လည်းလူပဲ လယ်သမားရယ်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်၊ကျွန်တော်တစ်နေ့တစ်နေ့ အလုပ်မှာကြုံလာရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ပင်ပန်းမှုတွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေကို ဒီသစ်ပင်လေးဆီ ပြောပြောပြီး ချန်ထားခဲ့တယ်။ နောက်နေ့ ရုံးသွားတော့မှ ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ယူသွားတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မိသားစုနဲ့ ကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတာပါဆိုပြီး လယ်သမားကို နည်းလမ်းလေးမျှဝေပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာဘဝတွေဟာ အမြဲအဆင်ပြေနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစုတွေ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးညှိနှိုင်းနေထိုင်ရတော့ ပိုဆိုးတယ်။ တစ်ယောက် စိတ်ဆင်းရဲ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာ တစ်ယောက်က အရမ်းပျော်ရွှင်ပါတယ်သွားလုပ်လို့မရဘူးလေ။ အ‌ခြေခံလူ့ကျင့်ဝတ်လို့ ကျွန်မနားလည် ထားပါတယ်။ ဒီပုံပြင်လေးရဲ့ မူရင်းကို ချစ်ကင်းစွတ်ပ် လို့ခေါ်တဲ့ အာဟာရရသစာပေများမှာ ပြန်ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မ နားလည်ခဲ့တာကတော့ ဘဝမှာ ခွဲခြားနားလည်တတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ် ဆိုတာပါပဲ။အလုပ်မှာ အဆင်မပြေတာ၊ အလုပ်ရှင် ဆူတာခံရတာတွေက အိမ်ကမိသားစုအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ်ပါ။ အိမ်ပြဿနာ အိမ်မှာညှိပြီး အလုပ်ပြဿနာ အလုပ်မှာအဖြေရှာသလိုပေါ့။ တစ်ခါတလေ ဇနီးမယား၊ သားသမီးကို ပြောပြရ ခက်ခဲရင် အခုလိုပဲအပင်လေးတစ်ပင်၊ သက်မဲ့လေးတစ်ခုကို ‌အဖော်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျင့်သားရနေတဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ အခွင့်ထူးတွေကိုလည်း တစ်ဖက်မှာ ချက်ချင်းစွန့်လွှတ်ဖို့ မလွယ်ဖူးဆိုတာ သိပေမယ့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ခွာချ၊ တကယ်အရေးကြီးတာတွေ ပိုလေးနက်တာတွေကို တွေးမိရင် ဘဝဟာ ပိုပေါ့ပါးလာတတ်ပါတယ်။ သတင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီး တွေးလိုက်တာ ကျွန်မအာရုံက ထပ်ပြောင်းသွားပြန်တယ်။ လမ်းသွားလမ်းလာ လူတိုင်းကို လိုက်ကြည့်လို့ သေချာတာတစ်ခုကတော့ သူတို့ဆီမှာ အပြည့်အဝ ပျော်ရွှင်နေတယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ ရှိနေတယ်။ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ တချို့က အတွင်းပိုင်းမှာ စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီး မျက်နှာကို တင်းချင်ယောင် ဆောင်ထားတယ်။ ဈေးသည်လေးတွေကအစ အကုန်လုံးမှာ အသက်ရှင်ချင်စိတ်နဲ့ ရှင်သန်သူတွေရဲ့ ရှင်ကျန်ရစ်လို့ခက်ခဲတဲ့စိတ် ရှိနေတာပါပဲ။ စိတ်ပင်ပန်းမှု‌ကြီးကို ထမ်းထားရပြီး အပြည့်အဝမပျော်ရွှင်ရဲ၊ အပြည့်အဝ မလုပ်ရဲတဲ့ စိတ်တွေ။ နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုလို စိတ်ပင်ပန်းလွယ်လာတယ်။ ကျွန်မလည်း အပါအဝင်ပါပဲ။ အရင်ထက် ဒေါသ ပိုထွက်တတ်လာ၊ ပိုသိမ်ငယ်လာ၊ ပိုအားငယ်လာနဲ့ ပါပဲ။ ကျွန်မ အကုန်လုံးကိုအပြည့်အဝမသိပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝန်းထဲတော့ လွတ်‌မြောက်နယ်မြေရောက်နေလို့ သေသွားတဲ့သူတွေ၊ ထောင်ထဲ ရောက်နေသူတွေ၊ မြေပြင်လူတွေကို အားနာတဲ့ စိတ်ရယ်၊ ထောင်ထဲရောက်နေသူတွေကလည်း ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေနဲ့ သေသွားသူတွေကို အားနာနေရပြန်တာပါပဲ။ ‌သေသွားသူတွေကလည်း ပိုလုပ်ပေးနိုင်လိုက်ရခြင်း ဆိုတဲ့ အားနားစိတ်တွေရှိနေမယ်လို့ တွေးမိတာပါပဲ။ ကျွန်မတို့ထက် မကြောက်မရွံ့ပေးဆပ်ခဲ့သူတွေကိုတော့ အမြဲအားနာမိပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲကြီး၊ အကြပ်အတည်းကြီးမှာ တတ်နိုင်သမျှပါဝင်ဆောင်ရွက်ရင်း အားတင်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဖြစ်ချင်တယ်။ ရင်မောသူတွေ၊ မွန်းကြပ်သူတွေ အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်လိုက်တိုင်း ‌အပန်းပြေသွားစေမယ့် ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပေါ့။ ဒီ‌နေရာမှာမြေသင်းရနံ့တွေမရှိလည်း တိုက်ခန်းအနံ့တွေကိုကျွန်မချစ်ပါတယ်။ ရွှေနိုင်ငံကြီး ရွှေခေါင်း ပြောင်ပြောင် ဝမ်းကခေါင်နေပေမယ့် ဒီနိုင်ငံကြီးကို တကယ်ဒီမိုကရေစီရစေချင်ပါတယ်။ အခက်ခဲဆုံးအချိန်ကို တူတူကျော်ဖြတ်ပြီး ပြည်သူတွေ၊ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေအဖို့ ‌‌နောက်နှစ်နွေဦးမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိတဲ့ညနေခင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ” စာရေးသူ − Vera
Featured Selection – ” ရဲ(မြန်မာ) “
. ”တော်လှန်ရေးကာလ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွေ့အကြုံ” ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၁ )ရက်နေ့။ ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလျစ်လျှူရှုပြီး စံထားခဲ့ရသူတွေကို အကျဉ်းချလိုက်တော့ စိတ်နှလုံးတွေဟာ မှောင်ကျသွားခဲ့။ လှူလှူ ကူကူ သူတို့နဲ့မမြင်မတူရင် ရန်သူလို့ထင်လာတတ်တဲ့အနေအထားမှာ….. ဘယ်လောက်ပဲ အများကောင်းကျိုးလုပ်လုပ် အမျိုးကောင်းသားလို့မထင်တော့တဲ့နေ့က အမေ့အိမ်ကလေးနဲ့ဝေး ခဲ့ရတယ်ပေါ့။ ခြေလှမ်းတိုင်းက ထောင်နှုတ်ခမ်းလား…… သောင်ကမ်းလား……ဆိုပြီး မသေချာခြင်းတွေနဲ့ခန့်မှန်းလှမ်းနေရ။ မျက်လုံးတွေကလည်း နေ့မသိညမသိ ရောက်ရာအရပ်မှာ…… ကျီးကန်းတောင်းမှောက်။ တစ်နေ့နေ့ပေါ့ဆိုပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ခဲလေသမျှလည်း သဲရေကျခဲ့ရပြီ။ ပြောချင်တဲ့စကားတွေ လည်ချောင်း၀ထိ လျှံတက်လာတဲ့အခါ ရေနောက်နောက်နဲ့ရောသောက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဆို့နစ်ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် မျက်ရည်တွေပြိုလုဆဲဆဲဖြစ်လာတဲ့အခါ အားလျော့လိုစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ကောင်းကင်ထက်က တတ်စွမ်းသလောက်လင်းလက်ပေးနေတဲ့ ကြယ်တွေကိုရေတွက်နေလိုက်တယ်။ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မြိုချ အထီးကျန်တဲ့ညတွေကို ကျောခင်း အဆင်မပြေခြင်းတွေကို တစ်ထစ်ချင်းဖြိုဖျက် ရောင်နီကို မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ ကွေကွင်းတစ်ခါ ဖြောင့်စင်းတစ်လှည့်ဖြင့် ဆက်လျှောက်လာခဲ့ရင်းမှ အသက်နဲ့ခန္ဓာဟာ အမှန်တရားနဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒအတွက်ဖြစ်လာခဲ့။
စာရေးသူ − ရဲ(မြန်မာ)
Featured Selection – ” Nang Khem Sein “
. ငါတို့အားလုံးဟာ……. အာဏာရှင်ကကြိုးဟာ ငွေနဲ့ လက်နက်နဲ့ အခု၂၁ရာစုမှာတော့ ကပ်ရောဂါနဲ့ အင်အားကြီးသူတွေ ကစားကွက်ကြား အင်အားမဲ့သူတွေဟာ ရုန်းကန်ကစား။ အလုပ်ဆိုတာ လုပ်တိုင်း အောင်မြင်နေတယ် ဘယ်သူပြောလဲ သစ်ပင်တစ်ပင် ဖူးပွင့်ဖို့၊သီးဖို့ဆိုတာ သူ့ဗီဇအပြင် ရေ၊‌လေ၊မြေဩဇာနဲ့ လူတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ကံ၊ဉာဏ်၊ဝီရိယသာမက သူရရှိတဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှု မျိုးရိုးအစဉ်အလာအောက်က ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတွေ ကံကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးဆိုတာ ငါတို့နိုင်ငံမှာတော့ မြို့ နဲ့ နယ်ပဲ။ ဖိနှိပ်ခံရတာခပ်များများနဲ့ ခပ်နည်းနည်း ဒါပဲကွာတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပုံသေအတွေးအခေါ်တွေ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မှားခဲ့မှန်းသိတော့ အခု လူက ဗလာ၊ ခံစားချက်ဟာ နတ္ထိ အတွေးကသေးသေး၊ အတွေးကကြီးကြီး။ ငါ့ဘဝရဲ့ ပြိုလဲကာနီးအခြေ‌အနေတွေဟာ အိမ်မက်မက်ခွင့်မရှိတဲ့သူတွေထက် အများကြီး‌ အခွင့်အရေးရနေတာ။ ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပေါ်လစီကားတွေထဲ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတတ်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဟာ တကယ်ရှိတယ် ဟိုးဝေးဝေးကိုသွားရှာ‌မနေနဲ့ စာအုပ်ထဲမရှာနဲ့၊ ဇာတ်ကားထဲမရှာနဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတယ်။ ငါတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ငါတို့ရဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေ ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့အလုပ်သမားတွေ၊ ယမ်းငွေ့တွေကြားကစစ်ဘေးရှောင်တွေ လောကဒဏ်ကြားရုန်းထနေတဲ့ ငါတို့ရဲ့ ပြည်သူတွေ အခုငါတို့ရဲ့ လူငယ်တွေ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေ။ မြင်ရုံနဲ့ နာကျင်ရတဲ့ အထိအရှတွေ စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မလုံခြုံမှုတွေ ငါတို့‌ရေ၊ငါတို့မြေဟာ ရက်စက် ငါတို့လူတွေဟာ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ထွက်။ ခံစားချက်ကိုမျှဝေ နွေးထွေးမှုကိုမျှဝေ တရားမျှတမှုကိုမျှဝေ လူ့အခွင့်အရေးကိုမျှဝေ စာနာစိတ်ကိုမျှဝေ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုမျှဝေ ငါတို့အားလုံးဟာမျှဝေ။ ကဗျာမှာငါတို့ဆိုနေကြ ပြည်ထောင်စုအမွေ နောင်ဘဝမှာ ဒီနိုင်ငံထဲပြန်ဝင်စားရအောင် ဖိနှိပ်ခံရမှုကိုဒီမှာအပြီးသတ် ဖက်စစ်စိတ်ဓာတ်ကိုဒီမှာအပြီးသတ် တော်လှန်ရေးကိုဒီမှာအပြီးသတ် စည်းလုံးခြင်းနဲ့ ငါတို့တွဲလက်တွေ ခိုင်မြဲလျက်။ စာရေးသူ − Nang Khem Sein
Featured Selection – “Aung San “
Featured Selection – “Aung San ”
. ” မနက်ဖြန် ” ချွေးစေးများ နစ်မွန်း ရုပ်ခန္ဓာက အေးစက်စက် မျက်လုံးတွေ ဖွင့်ထားသလား ဆုံးဖြတ်ရတာ မသဲကွဲ ခေါ်သံလား အော်သံလား ဘာမျှမထူးခြား ငါ ဘီလူးစီးနေတာလား။ ကမ္ဘာကို မကြာခဏလာတဲ့ ကပ်ဆိုးက ငါတို့ကို ရက်စက်စွာ ဝါးမျို နေ့မြင်ညပျောက်တဲ့ လောကထဲ အသက်ရှင်အောင် ပြေးလွှားမနေရဘဲ Social Media မှာ ငါတို့ စိတ်ကိုရောင်းစားတယ်။ မည်းမှောင်တဲ့ ချောက်နက်ထဲ ငါ့တစ်ကိုယ်လုံး လွင့်စင်သွားနေဆဲ စိတ်ဟာ လေဟုန်မိတဲ့စွန်လို တရွေ့ရွေ့ ဝေးသွားနေတယ် ခြေကားယား လက်ကားယား ဘုရားလည်းတ အမိလည်းတ ဒါ အိပ်မက်ဆိုးလား။ အတ္တနဲ့ဖုံးလွှမ်းတဲ့ လောကကြီးက ငါ့အတွက် အကျည်းတန်မှန်တစ်ချပ်ပဲ ဦးနှောက်တွေ ဖုန်တက်ပြီး သုံးစားမရလို့ ပစ်ချခဲ့ရတာအခါခါ နေ့ဘက်လား ညဘက်လား ကြယ်တွေဆိုတဲ့ သီချင်းသံ နေ့ဘက်မှာ ငါကြားမိတယ် ကမ္ဘာ့မကြေဘူး။ မကောင်းဆိုးဝါးဟာ လက်ညိုးကွေးပြီး အိပ်မက်တွေကို ခိုးတယ် လင်းအားမကောင်းတဲ့ ဖျောက်ဆိပ်ကြယ်တွေ ကမ္ဘာမြေက မီးလုံးတွေကိုအံတုနေဆဲ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ ရုတ်တရက် ဖျတ်ခနဲကြွေကျ ငါတို့ဟာ နဂါးငွေ့တန်းကကြယ်တွေလား။ နံရံပေါ်က ပြက္ခဒိန်ဟာ မှင်နီတွေနဲ့ ပြည့်နှက် အတိတ်တွေ အားကောင်းခဲ့သလောက် အနာဂါတ်တွေက မရေမရာ ပစ္စုပ္ပန်မှာ လမ်းပျောက်နေမိ ငါ မျက်လုံးပွင့်ခဲ့တဲ့ညတွေပေါ့။ နောက်ဆုံးပေါ် ကားတစ်စီးရဲ့ ဖုန်သုတ် အဝတ်တစ်ခုလို ငါ့ဘဝဟာ ခမ်းနားဆဲ လမ်းမှားတဲ့ အတ္တကောင်တွေကို တွန်းထုတ်တဲ့ င့ါလက်တွေ အရောင်လက်နေခဲ့တယ် ဝမ်းကတော့ ဟာနေဆဲ။ မုန်တိုင်းထန်တဲ့ ပင်လယ်ပြင်ဟာ မည်းမှောင် တိတ်ဆိတ်ပေမယ့် ငါ ကူးခတ်နေရဆဲ ကမ်းလည်းမမြင် လမ်းလည်းမထင် ငါ ကူးခတ်နေရဆဲ မသေချာတဲ့ မနက်ဖြန်အတွက် ငါ ငါ ငါ … ကူးခတ်နေရဆဲပါ။
စာရေးသူ − Aung San
Featured Selection – “နွေယုမေ” .
“တော်လှန်ရေးကာလ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွေ့အကြုံ” (၁) ဝိုးတိုးဝါးတားပုံရိပ်တွေ သံစုံဟစ်နေတဲ့အသံတွေ ပြေးလွှားနေကြသလား ကခုန်နေကြသလား ခေါ်ကြစမ်းပါဗျာ ကျနော်လည်းလိုက်မယ် လွတ်လပ်ခြင်းကိုရှာဖွေမလို့။ (၂) သနားစရာအရုပ်ကလေး ခွေးရူးတွေဝိုင်းဆွဲကြသတဲ့ ဟိုနားတစ်စ ဒီနားတစ်စနဲ့ ကြည့်ရက်စရာမရှိဘဲကိုယ့်လူ မကျေနပ်လို့သွားမောင်းတဲ့သူပါ ပြန်ကိုက်သတဲ့ဟ ဒီသတင်းတွေကြား ငါဟာငူငိုင်ရင်း အရုပ်ကလေးဖြစ်သွားလေသလား။ (၃) ငှက်တွေပျံတယ် တိမ်တွေလွင့်တယ် မိုးသားပြာမှာ တိမ်တွေရုပ်ရှင်ပြနေကြတယ် ငါဟာပြတင်းပေါက်မှာနေရာယူပြီး ထိုင်ငေးမိတယ် သက်မဲ့ကျောက်ရုပ်ကြီးလို ငါဖြစ်ခဲ့ပြန်။ (၄) နေရောင်ခြည်ဖြာတဲ့စပါးခင်းထဲ မြွေတစ်ကောင်လိုတိုးဝင်ပြီး သူတို့နဲ့ယိမ်းကမယ်ဟေ့ ဒီနေ့တော့ငါလွတ်လပ်မလားပေါ့ ဒီလူသားတစ်ယောက် အသက်မရှိလေသလား လွင့်မျောနေသလား မခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ ရပ်တည်နေပြန်။ (၅) ကြယ်ကလေးတွေမှိန်တုတ်တုတ် လကလေးကသာသာပေါ့ ခေါင်းမော့ပြီးလက်ဆန့်တယ် နှလုံးသားကိုတိုးဝင်ကြစမ်းပါ ငါ့ဝိဉာဉ်ကိုထိကြစမ်းပါ ငါမင်းတို့လို လွတ်လပ်စွာ လွတ်လပ်စွာနဲ့ အေးချမ်းချင်ပြီ။ (၆) ဩကာသနဲ့စတဲ့တရားတွေကို စိတ်ငြိမ်ဆေးအနေနဲ့ကျွေးလိုက်တယ် မင်းအေးချမ်းတော့ပေါ့ ရွတ်နေတဲ့တရားတွေနောက် ဒီအရိပ်မလိုက်ဘဲ အဆုံးမရှိလျှောက်သွားပြန်ပြီ။ (၇) ကြယ်တွေကြွေတယ် အနာဂတ်တွေအခြွေခံရတယ် ဒီကာလရဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်ပေါ့ စိတ်နှလုံးတွေမခိုင်ခဲ့ပြန်ဘူး ပိတ်လှောင်မှုတွေပေါင်းပြီး အမှောင်တိတ်နေရာလေးမှာ ရင်တွင်းအော်ဟစ်ပြီး အသံတိတ်နဲ့ငိုကြွေးရတဲ့နေ့တွေဟာ မရေတွက်နိုင်ခဲ့။ (၈) ဒီရုပ်ကြီးဟာအရိပ်မဲ့တယ် ကျန်းမာရေးတွေဖောက်တယ် ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုနဲ့ အနာဂတ်တွေပျောက်ခဲ့တယ် ရှေးရိုးဆန်အသိုင်းအဝန်းတွေကြား လှောင်ရယ်သံတွေ ကျင့်ဝတ်မရှိတဲ့စကားတွေနောက် မွန်းကျပ်ပိတ်လှောင်ခဲ့တာ နေ့ပေါင်းမျာစွာနဲ့ နှစ်နဲ့ချီကြာခဲ့။ (၉) ခင်ဗျားတို့ကြုံဖူးလား အများနဲ့တစ်ယောက်ဟစ်အော်နေရသလိုမျိုးလေ ဘယ်သူမှအားမပေးတဲ့လမ်း အိပ်မက်တစ်ခုသာကိုင်ရင်း အိမ်လေးထဲနေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေက ဘယ်လောက်ဆိုးရွားလဲဆိုတာပေါ့။ (၁၀) အစကတော့ ဒုက္ခတိုင်းဟာ ခဏတာလေးလို့ပဲ ကျုပ်ထင်ခဲ့တာ ခုတော့နှစ်နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပြီ လွတ်လပ်ချင်တဲ့အတွေးတွေ မွန်းကြပ်တယ်လို့အော်ဖို့တောင် မွန်းကြပ်နေလို့ နာကျင်မှုတွေဟာ ကျုပ်စိတ်ထဲအခဲစိုင်တွေဖြစ်တဲ့ထိ။ (၁၁) ချစ်ရသူတွေလွင့်သွားတာကြည့်ရတယ် စိတ်ကျမှုတွေဟာနေ့စဉ်ဝင်တယ် လှောင်ပြောင်မှုတွေဟာထိုးနှက်တယ် ရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြားတယ် ဒီလိုနဲ့လုံးချာနေတဲ့ကျုပ်ဘဝဟာ လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေဖို့ မလိုလားတော့ တိတ်တိတ်လေးကြွေသွားဖို့သာ မျှော်လင့်မိခဲ့။ (၁၂) အရာရာဟာပင်ပန်းတယ် လွှတ်ချဖို့အဆင်သင့်တဲ့ထိ ဒီမိန်းကလေးပင်ပန်းနေပြီ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့ခါ ဝန်းကျင်ကအဖြစ်တွေကိုတွေ့တဲ့ခါ ထွက်သွားတဲ့အရိပ်ကိုချုပ်ကိုင်ရင်း အားတင်းရပြန်တယ် နိုင်ရာတွေကူရပြန်တယ် မြူမှုန်လောက်အားနဲ့ပေါ့။ (၁၃) လက်ထဲမှာပိုက်ဆံမရှိဘူး မိသားစုတွေမကြည်ဘူး ဟားတိုက်ပြီးဝိုင်းရှုံ့ကြတယ် ဒါပေမယ့် စွန်ကလေးလိုလေ ဆွဲတဲ့သူတွေနောက် ရှိသမျှဒေါက်တွေအားပြုရင်း လေထဲမှာရုန်းကန်ပေးရအုံးမယ်။ (၁၄) လိုအပ်သူတွေအတွက် ပိတ်လှောင်မှုတွေကိုခဏသော့ခတ်ခဲ့တယ် ပျော်ရွှင်မှုတွေဖန်တီးပေးတယ် အားအင်တွေပေးတယ် သူတို့တွေအဆင်ပြေရင် ကျုပ်ကျေနပ်တယ် ရှင်သန်မှုကိုအဓိပ္ပာယ်ဖြည့်ခဲ့တယ်။ (၁၅) တစ်နေ့နေ့တော့လေ ကျုပ်ဇုန်တစ်ခုခုမှာမြောရင်း အိပ်မက်တွေထုဆစ်ချင်သေးတယ် သိုလှောင်မှုတွေကိုပစ်ချချင်သေးတယ် တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ အားပါးတရငိုချင်သေးတယ် ခုတော့ တွန်းလှန်ရင်းရုန်းကန်ရင်း….။ စာရေးသူ − နွေယုမေ